ch 14 မာကု – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch 14 မာကု
14:1 Now the feast of Passover and of Unleavened Bread was two days away. ထိုအခါယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များ, နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့, were seekingameans by which they might deceitfully seize him and kill him.
14:2 ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆိုပါတယ်, “Not on the feast day, lest perhaps there may beatumult among the people.”
14:6 သို့သျောယရှေုကပြောပါတယ်: “Permit her. What is the reason that you trouble her? She has doneagood deed for me.
14:9 အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, wherever this Gospel shall be preached throughout the entire world, the things she has done also shall be told, in memory of her.”
14:10 And Judas Iscariot, တကျိပ်နှစ်ပါး၏တဦးတည်း, went away, to the leaders of the priests, in order to betray him to them.
14:11 ထိုသူတို့က, upon hearing it, were gladdened. And they promised him that they would give him money. And he sought an opportune means by which he might betray him.
14:13 And he sent two of his disciples, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို: "တမြို့လုံးသို့ သွား.. And you will meetaman carryingapitcher of water; သူ့ကိုနောက်ကိုလိုက်.
14:14 And wherever he will have entered, say to the owner of the house, ‘The Teacher says: Where is my dining room, where I may eat the Passover with my disciples?''
14:15 And he will show youalarge cenacle, fully furnished. ထိုအရပ်၌, you shall prepare it for us.”
14:16 And his disciples departed and went into the city. And they found it just as he had told them. ထိုသူတို့သညျပသခါပှဲကိုပြင်ဆင်.
14:17 ထိုအခါ, when evening came, he arrived with the twelve.
14:18 And while reclining and eating with them at table, ယရှေုသညျဟုပြောသည်, "အာငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, that one of you, who eats with me, will betray me.”
14:20 ထိုသူတို့အားဆို၏: “It is one of the twelve, who dips his hand with me in the dish.
14:21 ထိုအအမှန်ပင်, လူသားသည်ဝင်, just as it has been written of him. သို့သော်လူသားကိုအပ်နှံလိမ့်မည်ဟုလူအပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာတော်မူသောအားဖြင့်. It would be better for that man if he had never been born.”
14:22 And while eating with them, ယရှေုသညျမုန့်ကိုယူ. And blessing it, he broke it and gave it to them, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "ယူ. ဤသူကားငါ၏ကိုယ်ဖြစ်၏။ "
14:23 And having taken the chalice, ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း, he gave it to them. And they all drank from it.
14:24 ထိုသူတို့အားဆို၏: “This is my blood of the new covenant, which shall be shed for many.
14:25 အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, that I will no longer drink from this fruit of the vine, until that day when I will drink it new in the kingdom of God.”
14:26 And having sungahymn, သူတို့သံလွင်တောင်သို့ထွက်သွားကြ၏.
14:27 ထိုအယေရှုက: "သင်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုညဉျ့အခြိနျ၌အကြှနျုပျကိုပယ်ကျကြပါလိမ့်မယ်. ကမျြးစာလာခဲ့ပြီ: '' ငါသည်သိုးထိန်းဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်, and the sheep will be scattered.’
14:28 သို့သော်လည်းငါသည်နောက်တဖန်ထမြောက်တော်မူပြီးနောက်, ငါဂါလိလဲပြည်မှသင်တို့ရှေ့မှသွားလိမ့်မည်။ "
14:29 ထိုအခါပေတရုကလညျး, “Even if all will have fallen away from you, yet I will not.”
14:30 ထိုအယရှေုကလညျး, "အာငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, that this day, in this night, before the rooster has uttered its voice twice, သငျသညျအကြှနျုပျကိုသုံးကြိမ်ငြင်းပယ်လိမ့်မည်။ "
14:32 And they went toacountry estate, by the name of Gethsemani. သူသည်မိမိတပည့်ကပြောပါတယ်, “Sit here, while I pray.”
14:34 ထိုသူတို့အားဆို၏: "ကျနော့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဝမ်းနည်းဖြစ်ပါသည်, သေခံသည်တိုင်အောင်. Remain here and be vigilant.”
14:36 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "အဗ်ဗ, ခမညျးတျော, all things are possible to you. Take this chalice from me. But let it be, not as I will, သင်မူကား, လိမ့်မည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ "
14:37 And he went and found them sleeping. ထိုမင်းသည်ပေတရုကပြောပါတယ်: "ကိုရှိမုနျ, are you sleeping? Were you not able to be vigilant for one hour?
14:38 Watch and pray, သငျသညျအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မဝင်နိုင်စေခြင်းငှါဒါ. The spirit indeed is willing, ဒါပေမယ့်လူဇာတိအားဖြင့်အားနည်းသည်။ "
14:39 And going away again, he prayed, တူညီသောစကားများပြောနေ.
14:40 And upon returning, he found them sleeping yet again, (သူတို့မျက်စိလေးလံခဲ့ကြများအတွက်) and they did not know how to respond to him.
14:41 And he arrived for the third time, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို: “Sleep now, and take rest. It is enough. The hour has arrived. အကယ်, the Son of man will be betrayed into the hands of sinners.
14:42 ထလော့, ကျွန်တော်တို့ကိုသွားကြကုန်အံ့. အကယ်, he who will betray me is near.”
14:43 ထိုမင်းသည်နေဆဲစကားပြောနေစဉ်, Judas Iscariot, တကျိပ်နှစ်ပါး၏တဦးတည်း, ရောက်ရှိ, သူနှင့်အတူဓားနဲ့ကလပ်နှင့်အတူကြီးမားတဲ့လူစုလူဝေးခဲ့, sent from the leaders of the priests, နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့, နှင့်အသက်ကြီးသူတို့.
14:44 Now his betrayer had given themasign, ဟုဆို: “He whom I shall kiss, ဒါကြောင့်သူသည်. Take hold of him, and lead him away cautiously.”
14:45 ထိုမင်းသည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမှ, immediately drawing near to him, ဟုသူကပြောသည်: "မင်ျဂ, မာစတာ!” And he kissed him.
14:48 နှင့်တုန့်ပြန်, ယေရှုက: “Have you set out to apprehend me, just as if toarobber, with swords and clubs?
14:49 Daily သတင်းစာ, I was with you in the temple teaching, သငျတို့သညျငါ့ကိုကိုင်ဘူး. But in this way, the scriptures are fulfilled.”
14:50 Then his disciples, သူ့ကိုချန်ထားခဲ့ပြီး, all fled away.
14:52 ဒါပေမယ့်သူ, rejecting the fine linen cloth, escaped from them naked.
14:55 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, the leaders of the priests and the entire council sought testimony against Jesus, ဒါကြောင့်သူတို့ကအသေခံဖို့သူ့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူအံ့သောငှါ, and they found none.
14:57 အချို့သူမြားကို, မြင့်တက်တက်, bore false witness against him, ဟုဆို:
14:60 ထိုအခါယဇ်ပုရောဟိတ်, rising up in their midst, questioned Jesus, ဟုဆို, “Do you have nothing to say in answer to the things that are brought against you by these ones?"
14:61 But he was silent and gave no answer. နောက်တဖန်အ, the high priest questioned him, သူကသူ့ကိုအားဆို၏, “Are you the Christ, the Son of the Blessed God?"
14:62 ထိုအခါယရှေုကလညျး: "ငါဖြစ်၏. And you shall see the Son of man sitting at the right hand of the power of God and arriving with the clouds of heaven.”
14:63 Then the high priest, rending his garments, ကပြောပါတယ်: “Why do we still require witnesses?
14:64 You have heard the blasphemy. ဘယ်လိုကြောင့်သင်ဟန်ပါဘူး?” And they all condemned him, as guilty unto death.
14:67 And when she had seen Peter warming himself, she stared at him, နှင့်သူမကပြောသည်: “You also were with Jesus of Nazareth.”
14:68 But he denied it, ဟုဆို, “I neither know nor understand what you saying.” And he went outside, in front of the court; andarooster crowed.
14:70 But he denied it again. နှင့်ခဏအကြာတွင်, again those standing near said to Peter: “In truth, you are one of them. သင့်အတွက်, လွန်း, areaGalilean.”
14:71 Then he began to curse and to swear, ဟုဆို, “For I do not know this man, about whom you are speaking.”